ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Rapid Scaffolding (Engineering) Co. , Ltd.
Rapid ငြမ်း (အင်ဂျင်နီယာ) ကုမ္ပဏီလီမိတက်သစ်ခုတ်လုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ RS သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ပြီးကတည်းကစိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အောင်မြင်မှုမှာဖောက်သည်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများကိုတန်ဖိုးထားခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှု၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်သံမဏိငြမ်းပုံစံများနှင့်ပုံသဏ္systemာန်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ကျွမ်းကျင်သည်သာမကလူမီနီယံငြမ်းများကိုဖွံ့ဖြိုးရန်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ရည်မှန်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များတွင် Ringlock (Allround)၊ Cuplock၊ Kwikstage, Haky, Frames, Props စသည်တို့ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်းနှင့်အကွာအဝေး ၁၀၀ ကီလိုမီတာခန့်အကွာတွင်ရှိပြီးရှန်ဟိုင်းမှရထားဖြင့်မိနစ် ၃၀ နှင့်ကားဖြင့်တစ်နာရီသာဝေးသည်။ အလုပ်ရုံareaရိယာသည်အကျယ်အ ၀ န်း ၃၀,၀၀၀ နှင့်ဂိုဒေါင် ၁၀၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။
Rapid Scaffolding သည်အတွေ့အကြုံရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောအင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများပါ ၀ င်သည့်အတွက်ဂုဏ်ယူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှအမျိုးမျိုးသောတောင်းဆိုမှုများအရကျွန်ုပ်တို့သည်ငြမ်းနှင့်ဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ မည်သည့်စီမံကိန်းအတွက်မဆို ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်မှုအဆင့်တိုင်း၏ထိပ်တန်းအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားသောအတွေ့အကြုံရှိသောထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ရှိသည်။ အလုပ်သမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီကိုနေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးမှ ဦး ဆောင်သည်။ အလိုအလျောက်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်စက်ရုပ်ဂဟေဆော်ခြင်းစနစ်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းကို, ပျဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်သောသံမဏိပျဉ်ပုံစံစက်အသစ်တီထွင်ထုတ်လုပ်သည် ၁၀၀၀ တစ်နေ့လျှင် PCs ။ အတွေ့အကြုံရှိသောအလုပ်သမားများ၊ အဆင့်မြင့်စက်များနှင့်ကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်သည်ဖြစ်သည် ၂၅၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်တန်ချိန်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုအာမခံပေးပြီးလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးသည်အချိန်ဇယားကြောင့်ဖြစ်သည်။ Rapid ငြမ်း (အင်ဂျင်နီယာ) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရရှိခဲ့သည် ISO9001 အသိအမှတ်ပြု, အီး, ISO14001, OHSAS18001. ကျွန်ုပ်တို့၏ငြမ်းစနစ်များအားလုံးကို ANSI A10.8, AS / NZS1576.3, Japan standard JIS ကိုအတည်ပြုရန်စစ်ဆေးသည်။